Novel:Shuviro Yangu | Document Centre
Handina kunge ndazviona kuti ndiye,nguva yese yandainzwa bhero remota richirira ndaingotiwo hameno kuti ndianiwo ari kuridzirwa, ko mota ungadzipedza here. Ndakaramba zvangu ndichitoridza muridzo wangu ndichienda kunodzora mombe dzangu dzaive dzakuda kuyambuka mugwagwa kuenda kuminda yekwaZvigwidi.
Panguva iyi hwangu hupenyu hwaive dambudzo, gangaidza mukwenyi mhezi yekumusana. Kubvira zvandaive ndapedza zvidzidzo zvangu zve’A’ level handina kumboita zviya zvinoita vamwe zvekuti vanozoenda kumaguta kunotsvagawo mabasa. Makore mashanu aive apfuura ndichingovamo muruzevha. Ko ndaigoenda Harare kwaive nani wangu? Kumba kwaani kwandainosvika ndichiti gogogoi? Ndakaramba ndichingova zvangu kuruzevha ndichibetsera mai vangu kurima nekufudza mombe. Ndaive ndave umwe wevaya vanodeedzwa kuti mabhuza kana tiri kumusha. Zvainyadzisa kunzi uri mubhuza. Vabereki chaivo kana vadzidzisi waitonzwa vachikomekedza vanasikana kuti, “Eh zvamurimi mugoita basa rekunyengwa nemabhuza.” Paitaurwa izvi ndini umwe wevairerwa. Ini ndingatoti ndini ndaive ndave zibhuza nekuti vazhinji vandaive ndapedzerana navo chikoro vaive vapererawo kupinda mumativi mana enyika vachinoshavira mhuri dzavo. Vazhinji vandaitotiwo ndomabhuzawo seni vese vaive vave vadiki kwandiri. Munhu anonzi bhuza munhu anopedza chikoro sevamwe, kazhinji kana munhu anyora ‘O’ kana ‘A’ level yake kunyanya kuzvikoro zvekumusha anotarisirwa kuti potsi, aenderere mberi nechikoro achiendawo kunana MSU kana kumaCollege akasiyana-siyana kana kuti oendawo kudhorobha kunoshava ndiyo piri. Asi pazvinhu izvi kana watadza kuita chimwe chete chazvo manje, ukaramba uri kumusha ndiwe unenge wava bhuza. Ini Joel Zanda ndini ndaive rimwe remabhuza. Zita rangu rekuti Joel raive rakanaka chaizvo dai vanhu vairidanawo zvakanaka kuti Joel asi manje izvi zvinoitirwa vanhu vane hupenyu huri nani, zvino ini nekuda kwenhamo ndaive ndave kunzi Jowero.
Ndakafamba zvangu ndichinodzora mombe dzangu ndakaisa rekeni dzangu muhuro, asi mota iya yakaramba yakamira ichingoridza bhero zvakazoita kuti ndicheuke. Ndakaona munhu aive mumota muya achindininira ruoko kuti ndiende kwaaive. Yaive isiri mota yemhanga mhanga kwete, yaive mota svinu rino zimutumba reNavara dema dema.
“Hey Mukuwe, mhanya shamwari upedzise kudzora mombe idzo ndiri kuuya,’’ ndakadaro ndichida kuti Mukuwe mumwe mukomana wandaive naye padzoro remombe apedzise kudzora mombe ini ndave kutendeuka kudzokera kwaive nezimota riya. Kwatiri zvaitoshamisira kudaidzwa nemunhu ane mota. Ndakamhanya zvekuti pandaimhanya rimwe nyatera rangu rekuruboshwe rakasvedza kubva mugumbo asi handina kumira ndakangoti ndaizoriona gare gare asi ndambosvika kumota uku. Zviya zvekuti zvidhongi kana masoso anobaya isu tsoka dzedu dzaive dzajaira, vamwe taive takutoti tikabaiwa taisambokotama kubvisa aiwa, taingokwizira tsoka pasi soso rotobva rwendo rwuchienderera mberi. Nhamo ndaiiziva ini ndiyo yaive pandiri.
Ndakasvika pamota paya ndakamboti zvimwe ndiri kurota. Ndakakwiza maziso angu kuti ndinyatsoona kuti ndaiona chaizvo chaizvo here kana kuti ndairota.
“Its me Joel,ukushamisikei ndini,” akadaro Nathan achidzika mumota make achiuya kuzosangana neni. Haaaa vanhu vanochinja vakomana, ndakazvibvunza kuti ndiye here Nathan muzukuru wepaZvigwidi wandaidzidza naye kubva Form 1 kusvika tazonyora tese. Ganda rake chete akamira apo raitaura mari, hembe dzake dzichitaura mari, nharembozha yaaive akabata yaitaura mari, bhutsu yaive mugumbo umu yaitaura mari, chiringazuva chaive muruoko rwake rweruboshwe chaitaura mari, mota zvayo yaaive akafuratira ndingazotaurisa, regai ndingoti zvese zvaive pana Nathan yaive mari. Akamhanya akauya akandimbundikira, ndakamboda kumudzivisa, ndainyara zvangu kumuzadza zvindakwenya nairo ziya randainhuwa. Zvokonzerwa nenhamo ikawandisa, nhamo chaiyo kana yakakurova zviya izvi kana kugeza haugezi.
“Nathan,Nathan!,Is this you Nathan?” ndakamubvunza ndakamutarisa ndichibva ndazvitarisawo, ndakaona mutsoka dzake mune bhutsu dzakanaka dzemhando yepamusoro, ndakatarisa mutsoka dzangu ndikaona ndine makumbo akazara shena nezvingaka, rimwe gumbo rine nyatera rimwe richiseva pasi, ndoriya raive nenyatera raive radonha pandaimhanya. Ndakaona musiyano waityisa pauviri rwedu, kwaive kusiyana kweupenyu nemikana.
“Ko chii,Joel?Uri kuitei kuno nezera rako iri Joel?” akadaro Nathan achitaura akabata muchiuno neruoko rwake rwerudyi achiratidza kupererwa.
“Zvakaoma sahwira, kusiyana kwemikana, tiriko zvedu kuno tingaendepi?” ndakadaro ndichinhonga nhonga tsine dzaive dzazara pahovhorosi yangu nekuti pandaimhanya ndaive ndangopfumvudzira nemutsine.
“You can’t be serious Joel,you are a man. Mikana yei yauri kutaura ipapa. A man is not a failure because he never succeeded but when he never tries”,akataura achiratidza kushushikana chaizvo nezvandaive. Mumoyo mangu ndakangoti zvino kana achiti, “A man is not a failure because he never succeeded but when he never tries,” saka zvaireva here kuti ndaive ndisina kukundikana. Inga ndaive ndamboedzawo wani paive panzi kwaita ngoda kwaChiadzwa, ndakaendawo wani nevamwe ndichiedza asi ndakadzokako ndakangorembedza maoko tadzinganiswa nembwa dzemapurisa. Shungu ndaivewo nadzo semurume asi zvairamba kusvika ndakangozozvigamichira kuti ndihwo hwaive hwave hupenyu rwangu. Ko Nathan airevei?
“Shamwari zvakaoma, hakusi kuda wena asi ndinomboedzawo wena asi zvinoramba,” ndakataura ziso rangu richingova pamota yake ndichidongorera nekuti aive asiya door rakashama. Ndaitomuonerawo ipapo mukati meNavara ko ndaimuzivirepiwo zvangu ini Jowero.
“Heyy I think we have a lot to discuss,I was looking for you all along but I failed to get your number. Ndakamboedza kukutsvaga paFacebook but ndakatadza kukubata wena,” ah ini zvangu shuwa Nathan ainditsvaga paFacebook ndaipaziva here iyo nharembozha zvayo yekungoti hallo ndaive nayo here? Ndaiiwanepiwo zvangu ini fudzamombe raizivikanwa neraini rose.
“Zvakaoma Nathan,chitenda Mwari kuti wandiona chete iwe zvema facebook izvo iwe chisiyana nazvo,” ndakadaro ziso richingova mumota, panguva iyi ndaive ndachinyatsoswedera pedyo nayo zvino ndakunakirwa nekambo kaive kakurumbira mazuva iwayo kekuti Eriza, isu taingoita kekunzwira kumagirosa uko kwataizowanzoenda kana tavharira mombe mudanga. Panguva iyi ndaive ndakunyatsoita kekunzwira mujinga, ndohwaive hupenyu ka uhwu hwandaishuvirawo hwairaramwa naNathan.
“Anyway chinzwa Joel, ndiwe munhu wandafambira kuno, of course handingazoregi kusvikawo pamba apo kunoona vana mbuya asi ndafambirana iwe kuno, chindiperekedza ndisvike ndibve ndaona vana mbuya tozotaura zvizhinji ndambovakwazisa. Hazvizonaki kuti vagonzwa kuti ndauya ini ndisina kusvika pamba,” akadaro Nathan akupinda mumota.
“Shamwari ini pano apa ndine mombe dzedzoro, ndikazodzisiya manje dzikazodya kumunda kwaPenga uko ndarira, uyu mufana wandinaye kuti ndimusiye anadzo ega dzakawandisa haadzigoni zvese nembudzi, anodyisa. Zvotoita iwe chisvika uone vana mbuya manje manje zuva rotovira iri totodzivharira then tozokurukura manheru takanyatsogara pasi,” ndakadaro ndichiisa rekeni dzangu muhomwe yekumashure yehovhorosi.
“Okay Joel, chirega ndisvike. Gara zviya unonweiko zviya?” Nathan akadaro achivhura cooler box yaive pamashure yaive nezvinwiwa zvakasiyana siyana. Zvimwe zvacho kwaitove kuzvionawo kwekutanga.
“Haaaa isu tombosarudza here? Tongomwa chero,” ndakangodaro ko ndaigoti kudii.Taive tangojairaka iwo masupa iwayo.
“Okay take this”, akadaro Nathan achinditambidza maCane maviri.
“Sana kuvarairwa ndiri kudzoka toita zvandafambira, rega ndione vana muchembere. Then mangwana tsvaga munhu anoswera achikufudzira mombe then I will pay him, iwe neni ndoda kuti timbotaura. I have a lot to discuss with you,” akadaro akumutsa mota yake. Ini pfungwa dzangu dzaive dzakungoda kuti dai ndachivhura chinwiwa ichi ndachinzwa.
“Iri bhoo Nathan iwe wona vana muchembere ini ndiri pano, kana ndavharira mombe ndosvika paden,” ndakadaro ndatovhura rimwe racho ndakutonwa. Ndairizivirepi kana zita racho handina kuverenga. Akabva asimuka akuenda.Pamba pedu nepana mbuya vake paive padhuze nepedu zvekuti waitoti ukadaidzira uri pamba munhu ari pambuya vake aitozvinzwa.
“Haaaa apa ndopazoita zambuko rangu apa,” ndakataura zvangu ndega ndakufamba kuenda kuna Mukuwe, ndakambofunga kuti ndidududzire macane ose ari maviri ndisati ndasvika kuna Mukuwe nekuti doro racho rainyanya kunaka asi ndakangozoti regai mufana wangu anzwewo chirungu.
“Ko ndevapiko varungu avo Jowero, makumira nemhene ka?” akadaro Mukuwe achimwerera mushure mekunge ndamutambidza rimwe cane kuti azvinzwirewo.
$1.39 – Purchase Checkout Added to cart